ओलीको मन्त्यब्य : महाधिवेशनबाट बहुमत, अल्पमत र नेतृत्वको लोकप्रियता जाँचौ (पूर्णपाठ) | khaltinews.com
ओलीको मन्त्यब्य : महाधिवेशनबाट बहुमत, अल्पमत र नेतृत्वको लोकप्रियता जाँचौ (पूर्णपाठ)
काठमाण्डौ । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशनबाट नै को बहुमत र को अल्पमतमा छ भन्ने स्पष्ट हुने भएकोले यसै वर्षको चैत्रमा महाधिवेशन गर्न जोड दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने, ‘ एकता गरिरहँदा, एकताको बाटोतर्फ अघि बढिरहँदा हामीले शक्तिको हिसाब गरेनौं, सामर्थ्यको हिसाब गरेनौं । केही पनि हिसाब नगरिकन एकताको भावनाका साथ म आफैँले निर्णय गर्दा, म आफैँ अल्पमतमा पर्नेगरी मैले कमिटीहरूको निर्माण गरेको थिएँ । अल्पमतमा पर्ने नै गरी एकता गरेको थिएँ । पूर्व एमालेभित्रको स्थिति पनि हामी सबैलाई थाहा थियो र फेरि पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दिइएको संख्यासमेत जोड्दा के हुन्छ ? त्यो पनि थाहा थियो र थाहा छ । एकतातर्फ जाँदाखेरी, एकताको भावनाका साथ जाँदाखेरी त्यस्तो संख्याले केही पनि बिगार्दैन ।
त्यो संख्या एकताको भावनाका साथ अगाडि बढ्नका लागि सबैमा एउटा उत्साह र समानताको भाव, सम्मानको भाव र हामी साझा कर्तव्यमा केन्द्रित भएर, साझा उद्देश्यमा केन्द्रित भएर, साझा लक्ष्य जम्मा गर्न अगाडि बढ्दै छौं भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिलेका कमिटीहरू मनोनयन गरिएका थिए । यी कुनै अधिवेशन, महाधिवेशन वा सम्मेलनबाट बनेका निर्वाचित कमिटीहरू होइनन् र अहिले कसैले बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दाखेरी कोही आफ्नो अलोकप्रियताले अल्पमतमा वा कोही लोकप्रियताले बहुमतमा गएको स्थिति पनि होइन । त्यही हो भने चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौं भनेर हामीले भनेका छौं, गछौं भनेका छौं र महाधिवेशन गरौं । लोकप्रियता त्यहाँ प्रकट हुन्छ नि ! बहुमत को हो ? अल्पमत को हो ? त्यो गरे भइगो ।’
प्रस्तुत छ, नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले मंसीर १६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा दिएको मन्तव्यको पूर्ण पाठ :
हामी एउटा गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएका छौं । यो अत्यन्तै छर्लंङ्ग छ र छर्लंङ्ग हुँदै गएको छ । यो निकै जटिल छ । अझ बढी जटिलतम् बन्दै गएको छ । यस स्थितिमा मैले अध्यक्ष हुनुको नाताले र प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले पार्टीको एकता जोगाउने, पार्टी एकीकरणका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले निर्धारण गरेको समयभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने, बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन आपूmलाई केन्द्रीत गर्दै त्यसैलाई सफल बनाउन लागिपरेको छु । र, म हरतरहले त्यही कर्तव्य पूरा गर्ने प्रयासमा लाग्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेको छु ।
देशमा स्थिरता र स्थायित्व आवश्यक छ । हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको, बलिदान गरेर ल्याएको, हजारौं नेपालीको जीवन बलिदानबाट प्राप्त गरेको र लाखौको योगदानबाट प्राप्त यस प्रणालीको सुरक्षा, सुदृढीकरण र सफल कार्यान्वयनद्धारा अगाडि बढ्ने÷बढाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्दै पार्टीका कामहरू व्यवस्थित गरी अगाडि बढाउने र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, प्रगतिशील आन्दोलन, अग्रगामी आन्दोलनको सफलता र साख गिर्न नदिने कुरामा पनि मैले आफूलाई केन्द्रित गरेको छु ।
कमरेडहरूले त्यागको कुरा गर्नुभएको छ । त्याग क–कसले गर्नुपर्ने हो ? म एक पटक अध्यक्ष भएको छु, निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित हिसाबले नै अध्यक्ष भएको हुँ । निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा नै हो, नत्र भने अरु बाटा थिएनन् । त्यही निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा वार्ता गरेको हुँ, एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ र दुई अध्यक्षको प्रबन्ध गरेर एक अध्यक्ष भएको हुँ । यो सब त्यही पृष्ठभूमिमा हो । अरु दावी गर्ने साथीहरू त कमसेकम १३÷१४ वर्ष, १५÷१६ वर्ष र ३२÷३३ वर्ष पार्टी प्रमुख भएर चलाउनु नै भएको होला ! उहाँहरूले त्याग गर्नु नपर्ने ? लोकप्रियताको पनि बहुतै कुरा चल्यो । ठीकै छ, भोलि चुनावहरू पनि आउँछन्, जनता र कार्यकर्ताले जाँचून हाम्रो लोकप्रियता, के भएको छ र ? हेरौं । जाँचौंला । महाधिवेशनहरू, अधिवेशनहरू हुन्छन्, जाँचौंला । ठीक छ नि ! बीचमा हतार किन गर्ने र ? ‘कू’ को शैलीमा एकता–एकीकरणको बाटो छाडेर सत्तापलट अथवा कब्जा, यस्ता अनुचित बाटोबाट कब्जा गर्ने तरिका अपनाउने ? के यी कामहरूले हामीलाई एकताको बिन्दुमा पु¥याउँछन् ?
हामीले हिजो सहमतिका साथ महाधिवेशनसम्म जाने, एकता एकीकरणका काम तीन महिनाभित्र टुंग्याउने र दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने भनेको होइन ? महाधिवेशन गर्दा पनि सहमतिका साथ महाधिवेशन गर्ने भनेको होइन ? ती कुरा हामीले हाम्रो वैधानिक व्यवस्थामा पनि समावेश गरेका होइनौं ? अब यस स्थितिमा बहुमत र अल्पमत भन्न खोज्नु भनेको यो जालझेल र षडयन्त्रको कुरा मात्रै हो । यो ‘कू’ को कुरा हो र यो फाटोतर्फको यात्राको ‘प्रस्ताव’ हो । त्यसकारण फाटोतर्फको यात्राको ‘प्रस्ताव’ लाई अस्वीकार गर्दै म अझै पनि एकतातर्फ जाऔं भन्ने आग्रह साथीहरूलाई गर्न चाहन्छु । मैले भनेको छु, महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आई अरु साथीहरूले सञ्चालन गर्नुस्, मलाई इच्छा छैन र रहर छैन । मैले अर्को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा पनि मेरो इच्छा छैन भनेको छु ।
अहिलेको सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि सहमतिका साथ, परामर्शका साथ अगाडि जाऔं भनेको छु । मलाई आज बिहानको त धेरै जानकारी छैन, हिजोसम्मका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी छ । बाहिर शब्द एक खालका छन्, भित्र गतिविधि विल्कूलै विनाशकारी छ, विखण्डनकारी छ, देश र जनताप्रति गम्भीर धोका दिने प्रकृतिको छ । यसमा म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामी त नेपालका ‘भाग्यमानीहरू’ भित्र पर्छौं । हामी आफैं खानलाउन पाएका, घर भएका वा घर नभए पनि घरभेटीको घरमा बस्न पाएका, नातागोता आफन्तको पनि कमसेकम बेडा पार लगाएकाहरू नै छौं । तसर्थः ‘भाग्यमानी’ छौं ! कमसेकम यति भइसकेपछि त हामीले देशको बारेमा अलिकति सोच्ने गरौं । जनताको बारेमा पनि अलिकति सोच्ने गरौं । कोभिड–१९ को महामारीका बारेमा पनि अलिकति त सोच्ने गरौं ! गरिबी कसरी हटाउने ? अशिक्षा कसरी हटाउने ? पछौटेपन कसरी हटाउने ? जनताका समस्या कसरी हटाउने ? त्यस बारेमा पनि सोच्ने गरौं । त्यतापट्टि पनि हाम्रो थोरै ध्यान मनदेखि नै जाने काम होस् । तर, हामी बहुतै चतुर खेलाडी निस्कियौं । शब्द एक प्रकारको र व्यवहार अर्कै प्रकारको ! अर्थात्, एक खालको शब्द, अर्को खालको व्यवहार गरेर चकित पारिरहेका छौं !
मैले देखिराखेको छु, साथीहरू अत्यन्तै दुःखित मन लिएर दौडधुप गरिरहेका छन् । चारैतिर कुदेका छन् । पार्टी एकता गर्न सबै नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । एकताको यो डोरी चुँडिन नपाओस्, यस्ता आरोप, यस्ता लाञ्छनाहरूका बाबजुद पनि त्यस्तो चिन्ता र एकताको प्रयास देखेर मलाई साथीहरूको माया लाग्छ । उहाँहरूको भावना देखेर, त्यो भावनाको कदर गरेर मात्रै होइन, त्यस भावनालाई मेरो अत्यन्तै सम्मान छ । तर, म एक्लैले सम्मान गरेर त हुँदैन । साथीहरू दौडिनु भएको छ, एकताका प्रयासहरू गर्नुभएको छ । तर हामी यथार्थमा यस्तो गुटबन्दीमा छौं कि एकातिर सघन वार्ता र मान्छे तान्ने प्रयास व्यापक रूपमा भइराखेका छन् । यसरी मान्छे तान्ने प्रयासले केही पनि हुनेवाला छैन । गर्न खोजेको एकता हो भने मान्छे तान्ने प्रयासले केही पनि हुँदैन । मैले पहिलेदेखि पनि भन्ने गरेको छु, एकता गर्ने हो भने मान्छे तानेर, कसैलाई अल्पमतमा पारेर, कसैलाई गलहत्याएर कसैलाई केही गर्छु भन्ने ठानिएको छ भने त्यस्तो गलत मनसाय सफल हुँदैन ।
होइन, हामी एकताबद्ध भएर जाने प्रयास पनि गछौं, एकताबद्ध भएरै जान्छौं भन्ने हो भने एउटा प्रक्रियाबाट जाऔं र विधिबाट जाऔं । एउटा प्रस्ताव नामको झूठको पुलिन्दा देशव्यापी वितरण गर्ने, त्यो पुलिन्दा पार्टीको नाममा छाप्ने, लोगो प्रयोग गरेर छाप्ने, केन्द्रीय कार्यालयको नाममा छाप्ने अधिकार तपाईलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? यो व्यक्तिगत पार्टी हो ? निजी पार्टी हो यो ? अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? कि पार्टी कब्जा भइसक्यो ? पार्टीका नामबाट र पार्टीको दस्तावेज भनेर त्यो कसरी गयो र पार्टीले प्रकाशन र प्रशारण गर्ने निर्णय कहिले ग¥यो ? वितरण गर्ने निर्णय कहिले ग¥यो ? पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर कार्यालयबाट प्रकाशन गर्ने निणर्य कहिले ग¥यो ? इजाजत कहिले दियो पार्टीले ? यति हदसम्मको बेथिति गर्ने ? गुटबन्दी त थियो थियो, अब त गुटबन्दीभन्दा बढी बेथिति र मानिलिऔं यो पार्टी कब्जा नै भइसक्यो ? साथीहरूले पद्धति, प्रक्रिया र विधि निकै सिकाउनु हुन्छ । भन्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, प्रचार गर्नुहुन्छ तर व्यवहार …?
अनि बैठकहरूमा कोभिडको सन्दर्भम थुप्रै छलफल ग¥यौ । विभिन्न राष्ट्रिय समस्याको सम्बन्धमा थुप्रै बैठकहरू भए । त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका बैठकहरूमा साथीहरूको कुनै रुचि छैन, इच्छा छैन र सहभागिता पनि छैन । खासगरी अर्का अध्यक्षको कुनै रुचि देखिंदैन । त्यस्ता बैठकमा सहभागिताको कुनै रुचि नै छैन । जबकि विपक्षी दलका नेताहरूसमेत कैयौंमा आउँछन् । तर उहाँको त झमेला बढाउने बैठकहरूमा मात्रै रुचि छ । हामीले गर्नुपर्ने काम यतिबेला यही झमेला बढाउने हो र ? आज पनि हामी देशका बारेमा सोच्न सकिराखेका छैनौं । जबकि हामी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गरिराखेका छौं । अनुकूल बनाइराखेका छौं । भारतका विदेश सचिव नेपाल आए र दुईपक्षीय सम्बन्धलाई उचाइमा पु¥याउने, आपसी समस्याहरू वार्ताबाट समाधान गर्ने भन्ने कुराकानी भयो र समाधान गर्न नसकिने कुनै समस्या छैनन् भनेका छन् । तथ्य, प्रमाण र न्यायका आधारमा समस्याहरू वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भन्ने तरिकालाई केन्द्रभागमा राखेर विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ । भोलि चीनका रक्षामन्त्री आउँदैछन् र दुईवटै छिमेकीहरूसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध लगातार विकास हुँदै गएको छ । पारस्परिक सहयोग, सहकार्य, त्यसमा तीव्रता र त्यसको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा यहाँ रुचि र चासोसम्म छैन । यस्तो बेलामा हामीलाई ती विषयमा चर्चा गर्ने समय छैन । ती हाम्रा विषय पनि बन्दैनन् ।
हाम्रा विषय त कसरी मान्छे जम्मा गर्न सकिन्छ ? कसरी झूठफरेव फिजाउन सकिन्छ ? कसरी भ्रममा पार्न सकिन्छ र मान्छेहरूलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ र तथाकथित बहुमत कसरी पु¥याउन सकिन्छ ? त्यसमा केन्द्रित छ । अहिले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले यसढंगको पार्टी एकता भन्छ ? लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको अभावमा हाम्रो पार्टी विगतमा एकताबद्ध नभएको थियो ? पार्टी एकता÷एकीकरण लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त, बहुमत र अल्पमत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनस्थ, व्यक्ति कमिटीको अधिनस्थ र अल्पमत, बहुमतको अधिनस्थ हुन्छ भन्ने कुरा नसुनेर÷नबुझेर एकता नभएको थियो र ? त्यो कुरा हामीले महसुस गरेर बहुमत र अल्पमतका आधारमा वा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर यो एकता÷एकीकरण गरेका हौं र ?
कि त्यसभन्दा बृहत आन्दोलनको उद्देश्य, राष्ट्रिय उद्देश्य र जनताका हितहरूमा केन्द्रित भई पार्टी एकता र एकीकरणतिरको उद्देश्यका लागि यसको महत्वलाई आत्मसात् गरेका हौं ? यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा महान उद्देश्यहरू र ती उद्देश्यहरूप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताबाहेक कुनचाहिँ संगठनात्मक सिद्धान्तले एकता गरायो ? अब अहिले आएर लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त ! कतिबेला संगठनात्मक सिद्धान्त कुन रूपमा लागु हुन्छ ? एकता÷एकीकरणको बाटो छाडेर भ्रमपूर्ण ढंगले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका कुरा गरेर ? त्यसो हो भने ठीक छ । प्रचण्डजीले भन्नुभएको म सम्झन्छु, “बाटो बिराइएको छ भने पुरानै ठाउँमा फर्किनुपर्छ र त्यसलाई त्यहीँबाट सच्याइनु पर्छ ।” ल, ठीक छ, त्यसै गरौँ । फेरि फर्किएर त्यहीँ जाऔं, २०७५ साल जेठ २ गते नै फर्किऔं । र, त्यहीँबाट फेरि सुरु गरौं । हाम्रा उद्देश्यहरू यथावत् नै छन् भने हाम्रो एकताको आवश्यकताको बोध यथावत छ भने, अहिले पनि हामीले त्यसलाई सान्दर्भिक देख्छौं भने जेठ २ गते नै फर्केर जाऔं ।
मेरो फेरि पनि आग्रह छ, हामी ठीक धारतिर, ठीक बाटो र ठीक प्रक्रियातिर फर्किऔं । आवेग, उत्तेजना र द्वेष छाडौं । आफ्ना निजी र समूहगत आकङ्क्षा परिपूर्तिका लागि पनि हतार नगरौ । त्यसका वैधानिक फोरमहरू छन् नि ! यो एकीकरणको एउटा संक्रमणकालीन स्थितिलाई सहमतिका साथ टुंग्याऔं । त्यसपछि त पार्टी आम विधिमै चलिहाल्छ । अहिले पार्टी विधिमा चल्दैन होइन, विधिमा चल्छ । तर, मूलभूत रूपमा यतिबेला एकीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्ने, सहमतिका साथ प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरा नै प्राथमिक महत्वको कुरा हो । हाम्रा कमिटीहरू कुन निर्वाचित भएर, कुन सदस्यताका आधारमा, कुन भोटका आधारमा, केका आधारमा हामीले अहिलेका कमिटीहरू निर्माण गरेका थियौं ? मनोनित गरेको होइन ? एकताको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर मनोनित गरेको होइन ? एकताको भावनालाई ध्यानमा राखेर सानो र ठूलो नभनिकन पूरा सम्मानका साथ सङ्ख्यात्मक बहस नगरेको होइन ?
अनि त्यो स्पिरिटबाट गरिएको अस्वभाविक सङ्ख्यात्मक प्रश्नलाई त्यस सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार गलत र अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन । हामीले जे काम थालेका थियौं, पहिले त्यो पूरा गरौं । जे काम गर्ने र जहाँ पुग्ने भनेर थालेका थियौं, त्यहाँ पुगौं । त्यसैले पार्टीको सन्दर्भमा महाधिवेशनको मञ्चसम्म त जाऔं ! महाधिवेशनको मञ्चसम्म जाने हामीले हिजो संकल्प र निर्णय नै गरेका हांै र महाधिवेशनको मञ्चमा पनि एकताबद्ध बनौं भनेका छौं । एकता र सहमतिका साथ एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं । अनि महाधिवेशन गर्नुभन्दा चार महिनाअघि अहिले फुटको खेती ? फुटको खेतीतर्फका यस्ता प्रयासहरूलाई मैले स्वीकार्न मिल्दैन ।